Izindlu e- Seahorse - I-Airbnb
Izindlu e- Seahorse
Ifulethi elilodwa lokulala elinovulandi omkhulu obekwe ngenhla kweBlue Lagoon, elinokubukwa okuhle nokusetshenziswa kwechibi elingapheli. Izindawo zokudlela kanye nezindawo zokucima ukoma ziwuhambo lwemizuzu emithathu. Ababungazi bahlala esizeni futhi banolwazi lwasendaweni oluningi abazimisele ukwabelana ngalo. Izivakashi zikhuthazwa ukuba zizisize ngobhanana nomango uma ngesikhathi sonyaka zisuka ezihlahleni ezingadini zasezindaweni ezishisayo.
Izinto eziningi ezikhangayo zasendaweni ezihlanganisa ukunyuka kwentaba-mlilo, izimpophoma ezihlukahlukene, izindlela zemvelo nezingadi ze-botanical.
Zonke izindawo zokuhlala zine-AC emakamelweni okulala kuphela kanti amagumbi okugeza anamashawa. Amakhishi ahlome ngokuphelele anezitofu, iketela, i-microwave, i-toaster, umenzi wekhofi, isiqandisi nesiqandisi nomshini wokuwasha. Zonke i-kitchenware zinikeziwe futhi i-Wi-Fi imahhala.
4.89 · 44 okushiwo abanye
Le ndawo isendaweni emangalisayo ngaphezulu kweBlue Lagoon. Ukubuka okuvela echibini le-infinity le-Bequia ne-Fort Duvernette nalo elingajatshulelwa kusuka endlini yesihlahla. Umakhelwane uphephe kakhulu futhi izinja zabanikazi bazo zizokwamukela.
Njengoba ababungazi behlala esizeni bayatholakala ukuze basize nganoma yimiphi imibuzo, nokho abaqashi banikezwa ithuba lokuthokozela ukuhlala kwabo